Kedu ihe ahịa B2B na Akaụntụ? | Martech Zone
Kedu ihe ahịa B2B na Akaụntụ?
Na Mọnde, Nọmba 4, 2014 Tuesday, August 1, 2017 Douglas Karr
Kedụ ka ndị otu ahia gị chere maka ahịa gị? Mgbe ọ bụla a jụrụ ndị na-ere ahịa B2B ajụjụ a, azịza ha bụ maka ụwa niile. Ndị na-ere ahịa na-eche na ha na-ehulata azụ iji wepụta nnukwu olu nke ndu, yana Ahịa adịghị larịị ịhụnanya. Mgbanwe ahụ na-aga ihe dị ka nke a.
Azụmaahịa: Anyị nyefere 1,238 Marketing Redsified Leads (MQLs) na nkeji iri na ise a, 27% karịa ebum n'uche anyị!
Ahịa: Anyị anaghị enweta nkwado anyị chọrọ.
Ọ bụrụ na nke ahụ mara nke ọma, ọ bụghị naanị gị.
Yabụ kedu ihe kpatara otu abụọ ji rara onwe ha nye iji kwalite ntụgharị na imechi ahịa na-agba mbọ ịrụ ọrụ ọnụ n'ofe oke B2B? Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na olu, ndị ahịa ahụ chọrọ iru ndị na-eme ihe ole na ole na ụlọ ọrụ ndị agbadoro. Ndị na-ere ahịa B2B na-adaberekarị fesa ma kpee ekpere mkpọsa na-emebi akụ nke ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ahịa nke mmadụ na-eme ndị mmadụ n'otu n'otu karịa ụlọ ọrụ.
O di nwute, Ahịa maara na ndị na-eduga ire ahịa nwere ike ọ gaghị akwụsị dị ka azụmahịa mechiri emechi. N'ihi nke a, ha anaghị echegbu ịgbaso ndị ndu ahụ those na nrụtụ aka malitere.
Igodo nke iji dozie nsogbu a bụ ịnweta otu abụọ otu ibe ahụ site na ị ga-aga. Nke ahụ bụ nkwa nke itinye ihe ngwọta dịka Demandbase B2B Cloudgwé ojii. Ọ bụ ngwụcha njedebe na-ejikọ teknụzụ ahịa gafee olulu ahụ ma na-eme ya maka B2B.
Site na akaụntụ Nchịkọta, Nhazi na Mkparịta ụka azịza, ikpo okwu na-enye ndị ahịa B2B ikike ị nweta nsonaazụ ma hụ n'ezie etu mbọ ha si emetụta ego ha na-enweta. Ọ na - ejikọ ahịa, mgbasa ozi na CRM, na - enyere ma ahịa na ire ahịa aka ịtọ ma soro ihe mgbaru ọsọ na ndụ ndị ahịa.
B2B Na-achọ Egwuregwu Egwuregwu Dị Iche - Accountzụ ahịa Akaụntụ
na Ahịa-Dabere na Ahịa, start na-amalite site na ịrụ ọrụ na Ahịa iji chọpụta ụlọ ọrụ ndị yikarịrị ịzụta. Mgbe ahụ, ị ​​na-erere akaụntụ ndị ahụ na ọdịnaya ọdịnaya, ma tụọ ọganiihu gị na ọkwa akaụntụ. Mgbe ị mere, atụmanya kachasị elu na-enweta nlebara anya ha chọrọ iji gafere ọfịs ahụ na ngalaba nke akaụntụ ọ bụla na-enweta ozi dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị. Ọrụ ndị a na-arụ ọrụ nke ọma karịa mkpọsa ndị a na-elekwasị anya na nke ukwuu, ha na-ebutekwa akaụntụ lekwasịrị anya na Ahịa. Nke ahụ pụtara na azụmaahịa ọhụrụ mechiri na mmụba karịa maka ụlọ ọrụ n'ozuzu ya.
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị Daalụ site na Ahịa, ọ bụ oge ịmalite ime ihe na-akpata atụmatụ ahịa na ebumnuche nke otu abụọ. Ọbụghị naanị na Ahịa na Ahịa nwere ike ịbụ ndị na-emekọrịta ihe ọnụ na pipeline B2B, mana canzụ ahịa nwere ike igosipụta ROI nke mbọ ya na akaụntụ ebumnuche.
Ahịa-Dabere na Azụmaahịa abụghị sayensị rọketi, mana ọ bụ uzommeputa maka arụmọrụ ahịa dị elu, ndị ahịa nwere obi ụtọ, na ịba ụba ntụgharị. O yikarịrị ka ọ ga-eduga n'ịhụ ahịa ahịa / ire ahịa. Kedu onye na-agaghị achọ nke ahụ?
Tags: b2bisi-alaahia igwe ojii